VOB Online in AVI Converter
> Resource > Video > Top 5 Free Online VOB in AVI Converter
Ma waxaad doonaysaa qalab si loogu badalo vob (format DVD) si avi? Halkan Waxaad tahay! Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa 5 VOB ugu fiican oo lacag la'aan ah online in AVI Converter iyo mid desktop Converter ugu dhaqsiyaha badan si aan kugu badalo vob si online avi effortlessly. Kuwa converters online, qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa in xaddidaadda size file ugu badnaan. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay la kulanto aad dalabka, waxaad lacag la'aan ah iyaga isku dayi kartaa oo kaliya. Wixii desktop ka mid ah, ma jiraan qaab ama file size la dhaafi karin. Waa ka badan boosaska badan oo horumarsan. Waxaad dooran kartaa sida aad jeceshahay. Iska akhriso hoos ku qoran si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Your VOB ugu badan waa in uu ahaado in ka yar 100 MB. Haddii aad bixiso $ 7 bishiiba, size file u noqon doono ilaa 200MB (7 beddelaad), halka haddii aad bixiso $ 16, waxa ay noqon doontaa ilaa 400MB (10 beddelaad). Fadlan akhri qaababka ay ugu weyn ee hoos ku qoran:
4 dhawr hawlood oo waaweyn waxaa ku qoran, diinta files, degsado faylasha, u diraya files iyo maaraynta files.
Beddelaan VOB in 3g2, AAC, ac3, avi, FLAC, flv, ipad, iPhone, iPod, mp3, MOV, mp4, Mpg, ogg, regelingen, webm, wmv
Online-converters kuu ogolaanaysaa inaad badalo VOB in AVI online la size file ka yar 100MB. Si loogu badalo size weyn ee file, waxaad u baahan tahay adeega caymiska ay. Rangs The bixinta ka soo $ 5 illaa $ 49 ay size file ugu badnaan kala duwan ka 800 MB in 1GB. Online-badalo qaababka at:
Qaabab Output ka mid ah AVI, MKV, MOV, FLV, MP4, 3GP, 3G2, iyo iwm
Devide Output ka mid ah iPhone, iPad, iPod, Android, Blackberry, Wii, PS3, PSP, Madaxweyne Siilaanyo 360, iyo iwm
Taageerada 3 siyaabood si loogu badalo: files geliyaan ka PC, diinta iyo soo bixi videos ka Internet, beddelid files ka DropBox.
Convert2mp3 sidoo kale loogu badalo karaa AVI si online VOB. Waxa kaliya ee ay taageertaa diinta videos ama Cajalado internetka. Markaad u timaadaan inaad convert2mp3, waxaad arki doontaa 2 sanduuq madhan. Wixii sanduuqa hore maran, nuqul kaliya link video ka YouTube, Dailymotion ama Clipfish ah. Wixii sanduuqa labaad, waxa kuu ogolaanayaa inaad serch magaca video, horyaalka, ama magac artist si aad u ogaato video doonayo la browser dhisay-in. Markaas waxaad dooran kartaa qaab diirada video ah, oo ka dibna riix "Beddelaan".
Waxaad u bedeli karaan oo keliya files VOB ka yar 25 MB la Cellsea. Waxaa jira 2 siyood oo aad ku dhameysan habka covnerision ah.
Qaabab ay taageerayaan: FLV, AVI, MOV, Mpg, VOB, MP4, wmv, dhexena, 3GP, DIVX
Wondershare Video Converter, sida Converter desktop ah, waa ka sii xirfad iyo awood badan oo dhan converters kale online kor ku xusan. Waa ay haatan VOB ugu fiican desktop in Converter AVI. Walwal xaddidaadda qaabka iyo xaddidaadda size max Your laga saari doonaa. Muuqaaladan ugu weyn waa sida belows:
No size file iyo qaab wax soo saarka la dhaafi karin ugu badnaan.